Bandhigga mashiinnada dawooyinka ee gu'ga 2018 ee Chongqing ayaa si naxariis leh kuu soo dhoweynaya.
Bandhigga mashiinnada dawooyinka caalamiga ah ee 55aad ee Shiinaha fair carwo guga） waxaa lagu qaban doonaa xarunta bandhigga caalamiga ah ee Chongqing laga bilaabo 20 Abriil, 2018 illaa 22 Abriil, 2018. Tan iyo markii la aasaasay 1991, bandhigga mishiinnada dawooyinka qaranka ayaa noqday bandhiggii ugu weynaa ee xirfadeed ...
Si gaar ah loo casuumay: Professor Zhang liqun waa Lataliyaha Guud ee Farsamada ee Shirkadeena
Shirweynihii 19aad ee XHKS ayaa si guul leh loo qabtay dayrtii Oktoobar. Shiinuhu wuxuu mar kale u dhoofay bar -bilow cusub iyo safar cusub. Waxaa sidoo kale jira koox dad ah oo sugaya imaatinka borofisar Zhang liqun, oo ah sayidkii warshadaha isdaahirinta, ee wada qurux badan ...
Shirkadda TekMax Technology waxay soo bandhigtay “Six Sigma” oo ah tababarka shirkadeena
Si kor loogu qaado tayada heerarka maareynta iyo hababka hawlgalka ee shirkadeena, waxaan soo bandhignay farsamada nidaamka maareynta tayada “Six Sigma”. Shirkaddayadu waxay bilowday tababar nidaamsan oo toban maalmood ah oo ah mashruuca Six Sigma laga bilaabo Abriil 2017, wadar ahaan afar tababar. Th ...
Hagaajinta maareynta, oo abuur koox koox
TekMax wuxuu abaabulay shaqaale si uu u barto nidaamka maareynta tayada nooc cusub ee ISO 9000.9001 Laga bilaabo 4 Sebtember, 2017 illaa 7 Sebtember, 2017 Dalian TekMax Technology Co., Ltd Macallin Hewei oo ka socda Shenzhen Dhammaan shaqaalaha Dalian TekMax Tababarrada nidaamka maaraynta tayada Urur kasta wuxuu u baahan yahay quali ...
Qaboojiyaha Hawada Qolka nadiifka ah, Habka Biyaha Qaboojiyay, Sifaynta Unugga Hawada Cusub, Daaqadda Qolka nadiifka ah, Qolka Nadiifka ah, Daaqadda Qolka Nadiifinta Qolka,